Buula Mareer Oo Laga qabsaday Alshabaab | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Buula Mareer Oo Laga qabsaday Alshabaab
Wararka ka imaanaya Deegaanka Buulo Mareer ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in xiligan uu dagaal culus kasocdo qeybo kamid ah Deegaankaasi gaar ahaan Koontaroolka laga galo Deegaanka Buulo Mareer.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo saakay duulaan ku qaaday Deegaano ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab ayaa usuurto gashay in ay la wareegaan Deegaano dhoor ah oo horey gacanta ugu jirtay Dagaalyahanada Xarakada Al-Shabaab.
Wararka aan hada heleyno ayaa sheegaya in Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ay gudaha u galeen Deegaanka Buulo Mareer ayna ka gudbeen koontaroolka Deegaankaasi laga galo, waxaana xabado xoogan ay xiligan ka dhacayaan Gudaha Buulo Mareer.
Goob jooge kusugan Deegaanka Buulo Mareer ayaa noo sheegay in dagaal aad u culus uu xiligan soconayo ayna Ciidamada huwanta ah gudaha usoo galeen Deegaanka Buulo Mareer, waxa uuna tilmaamay in dadkii ku dhaqnaa halkaasi isaga barakaceen.
Dagaalka saakay ka qarxay qeybo kamid ah Gobolka Shabeelaha Hoose waxaa ka dhashay qasaarooyin xoogan oo labada dhinac iyo waliba dad shacab ah kala gaaray, walina lama hayo qasaaro rasmi ah oo dagaalka ka dhashay.